Ibhokisi yasimahla ye-34, iNgxowa kunye nokuPakisha iiMockups | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngaba ujonge mockup yebhokisi, iingxowa okanye enye into yokupakisha? Ukusuka kule migca sihlala sizisa zonke iintlobo zezixhobo ezivela kwiilogo okanye iifonti, kwezi zifundo kufundiswa nabuphi na ubuchwephesha obunxulumene neenkqubo zoyilo ezibaluleke kakhulu ezinje nge-Illustrator okanye iFotohop.
Ngeli xesha sizakudlulela kwi-PSD Mockups malunga nento enokuba yiyo ukupakishwa kwazo zonke iintlobo zeemveliso. Ezi mockups zingama-20 zihamba ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya mockups zebhokisi okanye iibhegi zokuhambisa, ukuze ufumane umntu ofuna ukubonisa isipho esikhethekileyo okanye into enokuba yeyomsebenzi othile. Ukusuka ekufumaneni ibhokisi yezihlangu, ileyibhile yeebhotile zewayini okanye ezininzi kwiingxowa zazo zonke iintlobo, inyani kukuba zinoyilo oluyimpumelelo nolukhethekileyo.
Kuya kufuneka ndikhumbule ukuba ezi mockups ngumthombo ovulekileyo ke ungayisebenzisa nangasiphi na isizathu ngaphandle kokukhathazeka nangantoni na. Unako kwakhona ukungena kolu ngeno ukufikelela kulwazi yenza eyakho i-mockups okanye ingaba yintoni olunye uluhlu kubo kodwa ngakumbi kwintengiso yangaphandle. Izixhobo eziza kunceda ukuba zibe nereferensi elungileyo yokubonisa abathengi okanye yokubonisa uhlahlo-lwabiwo mali nangakumbi nangakumbi ngaphandle kokuchitha ixesha ngayo nayiphi na into.
Yintoni ehlekisayo kwaye yenzelwe ntoni?
1 Ukuphathwa kwebhegi eBrown
2 I-ceramic bottle mockup
3 Ukuphunyezwa kweNdebe yeplastiki
4 Ukuhanjiswa kwebhotile yotywala
5 Ukuthenga ibhegi yokuthenga
6 Ukurekhodwa kweVinyl
7 Kwincwadi enoqweqwe oluqinileyo
8 Kwibhokisi yemveliso
9 Iphepha leBrown lephepha lokulungiselela isonka
10 Kwincwadi yamanqaku yakudala
11 Ukufunyanwa kwelebheli yempahla okanye nantoni na
12 Olunye uXwebhu lwePhepha lokuGcinwa
13 Ukupakishwa kweCD
15 Ukupakisha i-cylindrical mockup
16 Ngeengxowa zeplastiki
17 Ingxowa yelaphu
18 Ukuhanjiswa kwelebheli yewayini
19 Ukuhanjiswa kwebhokisi yezihlangu
20 Ukuhanjiswa kwebhokisi yekhadibhodi
21 Ilebheli yesiqulatho esincinci
22 Ukupakishwa kweplastiki
23 Ukupakishwa kwephepha elimdaka
24 Ngebhotile yejusi
25 Iingqayi zobusi
26 Ikhadi lebhokisi yekhadibhodi
27 Kwisixhobo Bottle
28 Ukupakisha ityhubhu yekhadibhodi
29 Ithegi yengxowa yebhegi
30 Ukuthenga ibhegi yokuthenga
31 Ukuthengwa kwengxowa yokuthenga 03
32 Incwadi eluqweqwe oluqinileyo
33 Incwadana yamanqaku
34 Imizobo yencwadi yokubhalela
Ukuphathwa kwebhegi eBrown
Un I-mockup elula kunye nenhle ukuze wenze uluhlu lweebhegi wephepha ngononophelo olukhulu nokuzinikela.
I-ceramic bottle mockup
Kuya kufuneka ukhathalele ukuba Ibhotile okanye ukupakisha kunombala okhanyayo ukuze ihambelane ngcono neemeko zokuziphatha ezimnyama kunye negolide.
Ukuphunyezwa kweNdebe yeplastiki
Ngomthombo othile, oku ngokukodwa kwezo ndebe zeplastiki sihlala sinazo xa siya kwikhonkco lokutya okukhawulezayo.
Ukuhanjiswa kwebhotile yotywala
Ukuguqulwa ngokugqibeleleyo kwileyibhile onokuyenza sebenzisa ubhiya wakho wobugcisa ukuba uthengisa ekuhlaleni.
Ukuthenga ibhegi yokuthenga
Uyilo oluncinci kunye nolulula kakhulu ukuze ibhegi yokuthenga ibe ntle kakhulu.
ukuba umculo we-elektroniki oku kuthathwa kwirekhodi ye-vinyl kungaphezulu kokugqibeleleyo ukuyilungelelanisa nezandi ze-elektro zomculo wakho.
Kwincwadi enoqweqwe oluqinileyo
Ukuze upapashe incwadi, a Uyilo lochwethezo oluhambelana nazo zonke iintlobo zezikhokelo Ukufunda.
Como ukuba besinokuthengisa i-antivirus okanye inkqubo entsha yokusebenza, le mockup ilungile kuyo.
Iphepha leBrown lephepha lokulungiselela isonka
Ku ivenkile yokutya okukhawulezayo le bhegi yephepha ngegama lokumiselwa kwakho.
Kwincwadi yamanqaku yakudala
Ukuba ufuna isipho esihle kumhlobo okanye ilungu losapho, oku mockup ugqibelele ngakumbi ngomxholo wokuqala kunye nowakho.
Ukufunyanwa kwelebheli yempahla okanye nantoni na
Awusoze wazi ukuba sinokuyidinga nini le mockup ilebhela iimpahla zethu esifuna ukuzithengisa.
Olunye uXwebhu lwePhepha lokuGcinwa
Olunye ugcino lwe Iphepha elimdaka ngombala kwaye oko kubonisa ubuhle bokuba nakho ukongeza iintlobo ezahlukeneyo zesicatshulwa.
Nangona iCD iphelelwe lixesha, Njengesipho sepati inokuza iluncedo.
Inhle, ilula kwaye incinci, Yintoni enye onokuyifuna?
Ukupakisha i-cylindrical mockup
Ayizizo iitapile ezidumileyo, kodwa kunokuba luncedo kwimveliso yokutya efanayo.
Iingxowa zeplastiki zokuthengisa kunye ke fumana imali yokuphela kohambo olulandelayo.
Kuyafana nangasentla, kodwa ngengqondo yendalo engenakuphoswa.
Ukuhanjiswa kwelebheli yewayini
Si uqhubekeka newayini yakho, le ilebheli igqibelele, nangona ingenabunewunewu.
Ukuhanjiswa kwebhokisi yezihlangu
Con imibala emininzi le mockup enika ubomi obuninzi kwizihlangu ekufuneka zinxibe ipateni efanayo.
Ukuhanjiswa kwebhokisi yekhadibhodi
Ayinakuba lula oku kupakisha.
Ilebheli yesiqulatho esincinci
Zonke iintlobo zemisebenzi apho ileyibheli encinci yesikhongozeli, Umntu onezithambiso?
Como ukuba besingabeka i-napkins, Le phakheji ine-touch ekhethekileyo.
Ukupakishwa kwephepha elimdaka
Enye into enemibala yekhadibhodi ene ifonti engenanto engenanto.
Phantse njenge ukuba bekusisiqholo, kodwa ngakumbi ijusi okanye isotonic isiselo.
Iyafana neyangaphambili, nangona ine uyilo oluncinci kakhulu.
Ikhadi lebhokisi yekhadibhodi
Umxholo weentyatyambo nge ilebheli engenanto ilungele ukugcwalisa isicatshulwa esichazayo.
Perfecto isepha okanye ioyile ekhethekileyo iindevu xa zisefashonini.
Ukupakisha ityhubhu yekhadibhodi
Okunye indlela enomdla yokuqonda ukupakishwa intengiso kunye nentengiso.
Ithegi yengxowa yebhegi
ukuba fumana imali elungileyo yokuphela kohambo, le mockup enesicatshulwa esihlekisayo inokunika intsimbi.
Ilula kwaye ngaphandle kokujonga okuninzi ngaphezulu.
Ukuthengwa kwengxowa yokuthenga 03
Uyilo olugobileyo ngomnwe we-pastel kunye nepinki ibhegi entle enomnwe wobufazi.
Incwadi eluqweqwe oluqinileyo
Como ukuba sibuyele kwamanye amashumi eminyaka, le mockup inomdla nje.
Con umthombo ngesandla, Olunye ugcino lweencwadana.
Imizobo yencwadi yokubhalela
Ukuba kunjalo Incwadi yokufundisa yobugcisa, ilungele yona.
Ngaba unayo mockup yebhokisi oyithandayo kwaye ufuna ukwabelana nathi? Sibonise ibhegi yakho okanye enye into yokupakisha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » itemplates » Ibhokisi kunye nokuthwala ibhegi
Ukuqaliswa kwe-MAD sitsho
Phendula kumsitho we-MAD
Hayi mfondini, ezi mockups azizizo ezakho
Ukubaluleka kokufaka uphawu kwiprojekthi ebonakalayo